Haratsian-dalana eto an-dRenivohitra : mety hanao hetsika ireo mpitatitra taxi-be | NewsMada
Miantraika amin’ny sehatra maro ny haratsian-dalana eto an-dRenivohitra. Ifanilihana ve ny andraikitra rehefa tsy misy ny vola fa ifarombahana ny laza raha misy?
Sorena! Tsy misy tsy mitaraina amin’ny haratsian-dalana eto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina. Samy mitazam-potsiny ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny ary ifanilihana toy ny fako koa.
Miteraka fitohanan’ny fifamoivoizana ny haratsian-dalana, ankoatra ny mpivarotra amoron-dalana. Nandray andraikitra nanala azy ireo ny kaominina CUA, toy ny etsy Soarano sy Behoririka, ary iaraha-nahita avy hatrany ny vokany fa nihena ny fitohanan’ny fifamoivoizana. Tsy voavaha kosa ny haratsian-dalana. Vokany, mitaraina ny mpitatitra taxi-be, toy ny avy amin’ny Vondron’ny kaoperativa mpitatitra manodidina ny tanàn-dehibe (UCTS) fa mitombo ny masonkaren’izy ireo, amin’ny fanamboarana ny simba nefa lafo ny kojakoja. Eo koa ny fandoavana ny lamandy vokatry ny fampidirana fourrière ny fiara. Tsy avela hihodina ny fiaran’izy ireo ka matiantoka vokatry ny fitohanan’ny fifamoivozana noho ny haratsin’ny lalana.
Mangataka hanovana ny lalana sy ny lalàna
Manaloana ireo, mangataka ny CUA sy ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny ny UCTS, hamoaka lalàna ahafahana mihodina eny an-tenantenany fa tsy hatrany amin’ny faran’ny dia. Araka ny fanazavana, mety ho tonga hatrany amin’ny fanaovana hetsika izao fitarainan’ny mpitatitra izao raha tsy misy ny vahaolana aroson’ny tompon’andraikitra.
Andraikitry ny CUA ny manarina ny anaty tanàna, raha an’ny minisiteran’ny Asa vaventy ny lalam-pirenena (RN 1, RN 2, RN 3, RN 4, RN 7). Nanampy anefa ity farany toy ny fanamboarana ny eny Anosizato, Itaosy, 67 ha, arakaraka izay hoenti-manana eo am-pelatanany. Milaza fa manao izay ho afany kosa ny CUA, nefa tsy hita mivaingana.
Anisan’ny efa nandray fepetra ny mpitatitra kaoperativa Stat anio, mampitohy an’Ambohijatovo mankany Ambohimanambola, sy ny eo Mahazo mankany Anjeva. Voalaza fa hitokona izy ireo, anio manomboka amin’ny 9 ora, fa hiasa ihany aloha mialoha an’io fotoana io. Ho sahirana, noho izany, ny fodian’ny mpianatra, ny mpiasa, ny mpandeha amin’ny hariva ka mila miomana.